दाङको तुलसीपुरमा अज्ञात समूहद्वारा अन्धाधुन्ध गोली चल्यो — Himali Sanchar
दाङको तुलसीपुरमा अज्ञात समूहद्वारा अन्धाधुन्ध गोली चल्यो
खोलाको टेन्डरका लागि तर्साउन फायरिङ भएको आशंका !
हिमाली संचार संवाददातानारायण खड्का
दाङको तुलसीपुरमा एक अज्ञात समूहले सोमबार बेलुका अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गरेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ गोरौरा हुँदै वडा नं. १० सम्म उक्त समूहले बेलुकीपख अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गर्दै हिँडेको स्थानीयले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
उक्त समूहले बेलुका ८ बजेदेखि झन्डै साढे ८ बजेसम्म तुलसीपुर–सुकौरा सडक खण्डको विभिन्न स्थानमा गोली फायर गर्दा स्थानीय सर्वसाधारण नागरिक भने त्रसित बनेका थिए।
‘मोटरसाइलकमा सवार केही व्यक्तिले अन्धाधुन्ध गोली फायर गर्दै हिँडेका थिए,’ गौलौरा निवासी एकजना स्थानीयले भने, ‘उनीहरू बाइकमा सवार थिए। उक्त समूहले गोलौरादेखि फाइरिङ सुरू गर्दै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १० स्थित नवीन कवर र टीकाराम केसीको घरको आसपासमा झन्डै आधा दर्जन जति फाइरिङ गरेको सम्बन्धित व्यक्तिहरूले जानकारी दिए।
‘झन्डै साढे ८ बजेको हुँदो हो मेरो घर नजिकै ४ राउन्ड फायर भयो र त्यसपछि १०० मिटर दक्षिणतर्फ टीकाराम केसीको घर नजिकै पनि २/४ राउन्ड फायरिङ भएको थियो,’ कवरले भने। एक अज्ञात समूहले तुलसीपुर–घोराही सडक खण्डमा अन्धाधुन्ध फायरिङ गर्दै हिँडेको आवाज प्रहरी प्रशासनले पनि सुन्यो।
स्थानीयले पनि त्यो कुरा प्रहरीलाई खबर गरे । त्यसपछि ईलाका प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरबाट राति नै प्रहरी अनुसन्धानको लागि पुग्यो। प्रहरीको एक टोली मंगलबार बिहानैदेखि पनि अनुसन्धानको लागि खटिएको दाङ जिल्ला प्रहरी प्रमुख एवं एसपी बेलबहादुर पाण्डेले जानकरी दिए।
‘प्रहरी अनुसन्धानमै छ, फायर भएको ठाउँमा केही सबुत फेला पर्छ कि भनेर खोजी भइरहेको छ,’ एसपी पाण्डेले भने ‘केही शंकास्पद व्यक्तिमाथि सोधिखोजी समेत भइरहेको छ।
तुलसीपुर १० नवीन कवर वर्षोंदेखि पेसाले खोलामा बालुवा गिट्टीको काम गर्दै आएका व्यक्ति हुन्। उनले तुलसीपुरको पातुखोलामा वर्षौंदेखि जिल्ला विकास समिति र पछिल्लो समय जिल्ला समन्वय समितिले खोल्ने गरेको टेन्डर अनुसार खोलाजन्य वस्तुको व्यापार गर्दै आएका छन्।
मंगलबार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले तुलसीपुर अन्तरगत पर्ने बालुवा गिट्टीको लागि प्रमुख स्रोत मानिने ग्वारखोला, पाखुखोला र बबई नदी लगाएमा बालुवा गिट्टीको टेन्डर आह्वान गरेको छ।
मध्यान्ह १२ बजेसम्म टेन्डर आह्वानको समय तोकिएको छ भने मंगलबार नै टेन्डरसमेत सार्वजनिक गर्ने उपमहानरपालिकाले जानकारी दिएको छ। खोलाको टेन्डरमा आफ्नो हिस्सा खोज्ने र हैकम कायम गर्न चाहने अर्को कुनै समूहले तर्साउन तथा धम्काउने उद्धेश्यका साथ अन्धाधुन्ध फायरिङ गरेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।
नवीन कवर लगायतको समूहले पातुखोलामा वर्षौदेखि काम गर्दै आएको भए पनि यसपटकदेखि ग्वारखोलाको लागि पनि टेन्डर हाल्ने तयारी गरेको छ। दाङका खोलाहरू आयआर्जनका मुख्य आर्जन गर्ने स्रोत हुन्। यसमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेतादेखि प्रहरी प्रशासनको पनि मिलेमतो रहेको आशंका व्याप्त छ।
‘सेतो सुन’ मानिने बालुवा, गिट्टी र ढुंगाको टेन्डर आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि जिल्लामा ठूलो आर्थिक चलखेल हुँदै आएको छ। त्यही भएर आफूले टेन्डर नपाउने आशंकामा युवाहरूको अर्को समूहले अन्धाधुन्ध फाइरिङ गर्दै तर्साउने हर्कत गरेको हुन सक्ने आशंका छ।
यहाँका खोलाहरूमा टोलेडनदेखि जिल्लामै कहलिएका डनहरूको पनि संलग्नता रहने गरेको प्रहरीले पनि स्वीकार गर्दै आएको छ। यहाँ छिट्टै अकुत कमाउने सबभन्दा सहज माध्यम बालुवा गिट्टी नै हो,’ एक अधिकारकर्मीले भने, ‘तर त्यसरी आउने इजि मनिले अपराध पनि बढेको सत्य हो ।’ उनले प्रहरी प्रशासनदेखि स्थानीय सरकारका कतिपय व्यक्तिहरूको समेत त्यसमा लगानी हुने हुँदा प्राकृतिक स्रोतसाधनको चर्को दोहन बढेको बताए।
यहाँ पैसाले सबै खेल भइरहेको छ,’ ती अधिकारकर्मीले भने, ‘किसानलाई मारेर तस्कर पोस्ने खेल हुन दुर्भाग्य हो । खोला भासिएर किसानको खेतबारीमा सिँचाइका लागि पानी डोर्‍याउने कुलाहरूमा आज पानी जान सक्ने अवस्था नरहेको, तोकिएको मापदण्डविपरीत हुँदा मिलेमतोमा हुँदै आएको चर्को दोहन रोक्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
‘खोला, नदी र जुवा नै इजि मनिका माध्यमहरू हुन,’ ती अधिकारकर्मीले भने ‘ जबसम्म त्यो रोक्न स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासन लाग्दैन तबसम्म अपराध रोकिने कुरै आउँदैन। उनले स्थानीय सरकारको अभ्यास हुँदा पनि त्यसमा सुधार नआएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।